Dhaq dhaqaaqa Shiicada Yemen ee Xuuthiyiinta ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah kadib markii kooxdaasi gebi ahaan laga saaray gobalka Abyan ee koonfurta wadankaasi Yemen. | Saxil News Network
Dhaq dhaqaaqa Shiicada Yemen ee Xuuthiyiinta ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah kadib markii kooxdaasi gebi ahaan laga saaray gobalka Abyan ee koonfurta wadankaasi Yemen.
Yemen (Saxilnews.com)..Dhaq dhaqaaqa Shiicada Yemen ee Xuuthiyiinta ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah kadib markii kooxdaasi gebi ahaan laga saaray gobalka Abyan ee koonfurta wadankaasi Yemen.
Aug 13, 2015 Wararka
Hargeysa(Warsugannews) Xoogaga taageersan Xukuumada Caalamka aqoonsan yahay ee Cabdulrabi Mansuur Hadi oo kaashanaya ciidamada Sucuudiga iyo Imaaraatiga ayaa Axadii lasoo dhaafay la wareegay magaalada Zinjibar ee xarunta gobalka Abyan, iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay sidoo kale laga saaray maleeshiyaadka Xuuthiyiinta sadex magaalo kale oo ay uga sugnaayeen gobalka Abyan.
Xoogaga dowlada Yemen taageersan ayaa sheegay inay qorshahooda yahay inay gaaraan magaalada Caasimada ah ee Sanca muddo labo todobaad gudahood ah, si ay halkaasi uga saaraan Xuuthiyiinta oo kasoo talinayey Sanca tan iyo bishii September 2014.
Maamulka Xuuthiyiinta ayaa ugu baaqay taageerayaashooda inay bilaabaan abaabulka lagu difaacayo magaalada Sanca xili ay sii socdaan duqeymaha dhanka cirka ah oo ay wadaan diyaaradaha isbaheysiga Carabta ee uu hogaaminayo Sucuudiga.